Hivory ny EMMO « élargie » ahitana ny Zandary, Polisy, Tafika, mpandraharaha ny fonja, ny Fitsarana, sy ny Kaominina, miaraka amin'ny Prefen'i Toamasina rahampitso zoma amin'ny 09 ora maraina. Hiara-handinika ny paikady entina hamongorana ireo andian-jiolahy eto Toamasina izy ireo. Misy koa mantsy izao ireo « bande des 15 » manao ny ataony mihitsy mitety Fokontany isak’alina. Efa nanao hetsika manokana ny Zandary nanomboka ny atoandro teo, ka tsy hitsahatra izany raha tsy amin'ny fotoana ahitam-bokatra sy ny fiverenan'ny filaminam-bahoaka eto Toamasina indray aloha.
Nandritra ny filankevitry ny minisitra androany no nandraisana ny didim-panjakana fanendrena an’i Andrianirina Laza Eric Donat ho Tale jeneralin’ny Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly (Bianco). Kolonely teo anivon'ny Zandarimariam-pirenena i Andrianirina Laza Eric Donat no niala rehefa niasa tao amin'ny Bianco. Administratera sivily, mpahay lalàna ary efa lehiben'ny sampana mpanao fanadihadiana (Chef de division investigation) tao amin'ny Bianco Mahajanga izy. Izy no mandimby toerana an’i Andriamifidy Jean Louis, izay tapitra tamin’ny 24 jona 2019 ny 5 taona tsy azo havaozina, ny fe-potoana iasan’ny Tale jeneralin’ny Bianco.
jeudi, 25 juillet 2019 16:20
Toamasina: Nisy nanafika tao an-tranony Me Tody Arnaud
Ny alin’ny alarobia hifoha ity alakamisy 25 jolay ity no nitrangan’ny fanafihana mitam-basy. Vaky trano, miharo halatra sy herisetra no niseho tao amin’ny tokantranon’i Me Tody Arnaud. Nanapoaka basy ireo jiolahy.Naratra tamin’izany ny zaobavin’i Me Tody Arnaud. Lasan’ireo olon-dratsy ny vola sy ny entana sarobidy. Mpisolovava i Tody Arnaud. Solombavambahoaka taloha tao Soanierana Ivongo i Tody Arnaud. Anisan’ireo navitrika tamin’ny hetsiky ny depiote 73 teo amin’ny Kianjan’ny 13 Mey, nanomboka tamin’ny 21 aprily 2018. Nirotsaka hofidiana solombavambahoaka teto Toamasina izy tamin’ny fifidianana natao ny 27 mey 2019, fa tsy lany. Mitarika fikambanana MIRAMA izy. (Jereo Sary Tohiny)
Niazo ny lapan’ny Mpanjaka ao Buckingham i Boris Johnson androany tolakandro, naka ny tsodranon’ny Mpanjakavavy Elisabeth II, ho Praiminisitra. Nanome fe-potoana amin’ny 31 oktobra 2019 i Boris Johnson, hahatanterahan’ny Brexit, na ny fisintahan’i Angletera ao amin’ny Vondrona Eorôpeana, tsy misy fepetra. Ben’ny tanànan’i Londres taloha i Boris Johnson, ary izy indray izao no lehiben’ny antoko « Conservateur » nandimby an’i Theresa May. (Jereo Sary Tohiny)
Page 17 sur 466